Nanao fanaraha-maso hentitra ny ampahany rehetra sy ny fitondrana izahay, miezaka ny tsy hanana olana amin'ny kalitao eo am-pelatanan'ny mpanjifa.Hamaky bebe kokoa
7X24 ora an-telefaona na fanohanana teknolojia an-tserasera maimaim-poana.OEM/Customized fanompoana dia raisina.
Ny varotra mivantana amin'ny orinasa, tsy misy fahasamihafana amin'ny vidin'ny mpanelanelana.Hamaky bebe kokoa
Shandong XINRI mitondra Teknolojia Co., Ltd dia orinasa manokana amin'ny tapered-roller mitondra, cylindrical-roller mitondra, lalina Groove baolina mitondra, ondana sakana mitondra, kodiarana Hub mitondra sy ny santimetatra tsy manara-penitra famokarana enterprices.Ny orinasa dia manana velaran-tany mihoatra ny 2 tapitrisa metatra toradroa, mpiasa 500 efa misy, manana fitaovana fanodinana metaly isan-karazany mihoatra ny 360 vondrona, fitaovana fitiliana mihoatra ny 240 vondrona, Ankehitriny dia mbola mitady mpandraharaha ho an'ny marika XRL izahay manerana izao tontolo izao, raha misy mahaliana anao dia mifandraisa aminay mivantana.
Efa amidy any amin'ny firenena 120 mahery eran'izao tontolo izao ny XRL.Na ho an'ny fambolena, famokarana lamba, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fanontam-pirinty isan-karazany eny amin'ny seranam-piaramanidina, amin'ny rafitra fanamafisam-peo, fitaovana fampitana, tobin-jiro an-tsambo, kilalao na ho an'ny fitaovana ara-pitsaboana, fiara, XRL dia tsy misy afa-tsy ny sanda tsara indrindra amin'ny tsena midadasika. .
Namidy firenena 120 mahery ny XRL
Varotra eran-tany isan-taona bebe kokoa
mihoatra ny 150 tapitrisa dolara
Ny famokarana anatiny isan-taona
mihoatra ny 700 tapitrisa ny fahafaha-manao
Nahazo ny Certificate System Management Quality izahay.
MPAMPIASA MPANAO BEATRA IZAHAY
Aina maharitramora karakaraina
Nahoana no mifampiraharaha aminay?
Aiza no hanondranantsika?
Manolotra karazana bearings feno izahay, anisan'izany ny taper-roller bearings, Deep groove ball bearings, Pillow block bearings, Cylindrical roller bearings, Spherical roller bearings, Wheel hub bearings sy ny hafa.Ary ny isan-karazany avy amin'ny kely bearings amin'ny savaivony anatiny ny 20mm ny lehibe bearings amin'ny ivelany savaivony ny 500mm.Ho fanampin'ny bearings mahazatra dia mamokatra bearings tsy manara-penitra ihany koa izahay.
Ankoatra izany, dia mpanamboatra ho an'ny Rosia LADA, TZA, VPZ, SPZ, VBF sy KG, sy ny hafa.Mandritra izany fotoana izany, afaka manome serivisy OEM ihany koa izahay.
1. Ny dingana famokarana rehetra, toy ny forging, ny fihodinana, ny fitsaboana hafanana, ny fitotoana, ny fivoriambe ary ny famonosana, dia vita ao amin'ny orinasanay.Izany no mahatonga ny XRL Bearing afaka manome anao ny baolina tsara sy ny roller bearings amin'ny vidiny ambany indrindra ary afaka mahafeno ny fandefasana ara-potoana.
2. Amin'ny maha ISO9001: 2000 mpanamboatra voamarina, dia nanangana rafitra traceability vokatra.Ankoatra izany, XRL Co., dia manana ekipa ara-teknolojia matanjaka miaraka amin'ny injeniera Japoney hamaha olana isan-karazany amin'ny fampiharana sy ny fampiasana ny bearings.
3. Fanomezan-toky ny kalitao: 12 volana ny fiantohana kalitao, ny vola dia azo alaina na averina raha misy olana momba ny kalitao.
1. Manana fitaovana fitiliana kilasy voalohany izahay mba hamantarana ny mitondra ny angon-drakitra isan-karazany sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny mitondra.Isaky ny tsy maintsy hita aloha ny bearings raha mahafeno fepetra ny kalitao ary esorina mivantana ny bearings tsy mendrika.Noho izany dia afaka mahazo ny fitokisan'ny mpanjifa lehibe isika, ary mamatsy azy ireo mandritra ny taona maromaro.
2. Manana ny fahaiza-manaontsika R & D izahay, mba hanampiana ny mpanjifa hamaha ny olan'ny bearings tsy manara-penitra.Azontsika atao ihany koa ny manova ny marika manokana ho an'ny mpanjifa araka ny takian'izy ireo.
3. Afaka miantoka isika fa ny vidiny dia mety indrindra raha ampitahaina amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny kalitaon'ny bearings any Shina.Tsara kokoa ho anao ny mampitaha ny vidiny sy ny kalitao amin'ny mpamatsy.Saingy fantatry ny rehetra fa tsy afaka mividy ny vokatra avo indrindra amin'ny vidiny ambany indrindra ianao, fa ny toetrantsika no tsara indrindra raha mampiasa vidiny mitovy ianao.
Manana tsipika famokarana fikosoham-bary mandeha ho azy tanteraka sy tsipika fivoriambe miaraka amin'ny fitaovana fitiliana mandeha ho azy tanteraka izay mahatonga ny kalitaon'ny bearings ho avo be.Izahay dia manao ny bearings 100% voasedra.
Ny teknolojia fanodikodinana mangatsiaka tsy manam-paharoa amin'ny fizotran'ny fihodinana izay manatsara ny tanjaky ny peratra mitondra sy ny fiainana mitondra amin'ny alàlan'ny rafitra metallografika sy ny tsipika manaraka.
Ary ny teknolojia vaovao nitriding malefaka ho an'ny peratra anatiny sy ivelany ary ny tranom-borona izay mahatonga ny fampisehoana tsara kokoa sy ny androm-piainan'ny bearings.
Ankoatra ny varotra anatiny, ny XRL dia efa nanondrana tany amin'ny firenena sy faritra 120 mahery any ampitan-dranomasina anisan'izany i Japana, Korea, Malezia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonezia, Pakistan, Alzeria, Arabia Saodita, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Peru, Bolivia, Chile , Kenya, Zambia, Etazonia, Kanada, Meksika sns.
Efa nametraka masoivoho any amin'ireo firenena any Amerika Atsimo toa an'i Peroa sy ireo firenena Afrika toa an'i Kenya sy Zambia izahay, Ankehitriny dia mbola mitady mpandraharaha ho an'ny marika XRL manerana izao tontolo izao izahay, raha misy liana ianao dia mifandraisa aminay mivantana.